प्रेमका अनेक रुप
सुविन भट्टराई, फाल्गुन २, २०७४
जीवनको लामो यात्रामा अन्तत प्रेम कुनै एउटा सिउँदोमा विसर्जित हुन्छ । प्रेम कहिल्यै नचाखेको स्वादमा चाख्न योग्य भएर आउँछ, जसका केही गाँस मीठा, केही गाँस तीता । केही गाँसमा ढुंगा, केही गाँसमा झिँगा, केही गाँस पिरा, केही गाँस टर्रा, केही गाँस आँतसम्म पुग्ने, केही गाँसका टुक्रा दाँतमै अड्किने । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , फाल्गुन २, २०७४
सबैमा कौतुहल हुन्छ– प्रेम बसेको कति समय पछि यौनसम्पर्क गर्नु उपयुक्त हो त ? प्रेमिल जोडीले शारीरिक निकटताका लागि कति दिनसम्म पर्खनु उपयुक्त होला ? हुन त प्रेम जोडीमध्ये कुनै एकले यौनसम्पर्कका लागि हतार गरे अर्को पार्टनरले उसको मानसिकता नै विकृत छ भन्ने पनि सोच्न सक्छन् । यदि त्यसो हो भने लामो समय चुप लागेर बस्दा पनि अत्याधिक लजालु भएको शंका गरिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
पोखराका सेक्सी हाइवे
राजाराम पौडेल, फाल्गुन २, २०७४
उनी अनि म, सुन्दर, शान्त रमणीय एकान्त ठाउँ । बस्, त्यति भएपछि अरू के नै चाहियो र ? यो अहिलेका युवायुवतीहरूको मनमा खेल्ने कुरा हो । उनीहरूले रोमान्स गर्न, मायालुसँग घोत्लिन, कुराकानी गर्नका अतिरिक्त विभिन्न योजना बनाउन यस्तै ठाउँ रोज्ने गरेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
सेक्सी हाइवे @ बुटवल
टोपराज शर्मा, फाल्गुन २, २०७४
माया प्रेम साटासाट गर्ने जोडीहरूका लागि बुटवलको हिलपार्क अर्को सुरक्षित स्पट हो । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल अस्पताललाइनबाट पूर्वतर्फ करिब एक किलोमिटरको दूरीमा छ— हिलपार्क । हिलपार्कमा जुनसुकै सवारी साधन पुग्न सक्ने भएकाले जोडीहरूले पैदल हिँडिरहनु पर्दैन । पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाश सायमीको नजरमा अमर प्रेम गीत
संगाल घुम्टोहरू सजाउ केशहरू: स्वर : नारायण गोपाल, संगीत : गोपाल योञ्जन, शब्द : नगेन्द्र थापामेरो गीत सबै तिमीलाई : स्वर : अरुण थापा, संगीत : दिव्य खालिङ पुरा पढ्नुहोस्
सेलिब्रेटी विवाहको वर्ष
अभिनयमा सक्रिय रहँदा–रहँदै वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्ने साहसिक निर्णय गर्ने अभिनेत्री हुन्— निशा अधिकारी । निशाले नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा आबद्ध स्टार क्रिकेटर शरद भेषवाकरसँग लगनगाँठो कसेकी हुन् । लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको यो जोडीको वैवाहिक समारोहलाई नेपाली सञ्चारमाध्यमले समेत महत्वपूर्ण स्थान दिएका थिए । पुरा पढ्नुहोस्
विवाहअघि भ्यालेन्टाइन डे भनी प्रेमिल संसारमा डुब्नेहरूको भ्यालेन्टाइनको नशा विवाहपछि उत्रिन्छ अनि पश्चाताप गर्छन् भ्यालेन्टाइनलाई गाली गर्दै । पुरा पढ्नुहोस्
भनिन्छ, प्रेम अन्धो हुन्छ । त्यसैले प्रेम गर्ने जोडीहरू उमेर, जात, आर्थिक धरातल आदि कुनै पनि कुराको वास्तै नगरि प्रेममा चुर्लुम्म डुब्छन् । हरेक क्षेत्रमा प्रेमको उच्च महत्व छ । कलेज अध्ययनरत युवा–युवतीदेखि कामकाजी महिला तथा पुरुषहरू पनि प्रेममा लिप्त हुन सक्छन् । व्यवसायी, खेलाडी, राजनीतिज्ञदेखि कलाकारसम्म प्रेमको प्रसंगमा एक कदम अघि नै देखिन्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
सनूप र सुभेक्षाको भ्यालेन्टाइन
भ्यालेन्टाइन डेको पूर्व सन्ध्या पारेर एउटा रोमान्टिक गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । अमेरिका निवासी गीतकार अम्बिका गुरुङका प्रेमिल शब्दहरुको ‘ओ मेरी भ्यालेन्टाइन...’ गीतको म्युजिक भिडियो आईतबार साँझ सार्वजनिक भएको हो । पुरा पढ्नुहोस्
गायक अमृत क्षेत्रीले आफ्ना फ्यानलाई भ्यालेन्टाइन डे गिफ्ट सार्वजनिक गरेका छन् । अमृतले फ्यानका लागि दिएको उक्त उपहारमा पहिलो पटक उनकी श्रीमती संगीता क्षेत्री पनि सामेल भएकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
तपाईं तथा तपाईंकी प्रेमिका यो–भिला वा सेकेन्ड लाइफ सफ्टवेयर चलाउनुहुन्छ भने उनलाई त्यहीँ गिफ्ट दिएर वा घुम्न लगेर खुसी तुल्याउन सक्नुहुन्छ । त्यहाँ राम्रो खेल खेल्ने वा मनोरञ्जक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने सुविधासमेत छ । पुरा पढ्नुहोस्
पल शाह र सन्ध्या केसीको रोमान्स
लोकप्रिय अभिनेता पल शाहले मोडल तथा अभिनेत्री सन्ध्या केसीसंग रोमान्स गरेका छन् । भिडियोमा उनीहरुको प्रेमिल जोडी सुहाएको देखिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
राधिका अधिकारी, फाल्गुन २, २०७४
शारीरिक आकर्षबाट सुरु भएको युवायुवतीको सम्बन्ध कुन होटल, पार्क वा कोठामा पुगेर टुङ्गिन्छ पत्तै हुँदैन । हिजोआजको सम्बन्ध प्रेममा कम वासना र स्वार्थमा धेरै टिकेको छ । अहिले हरेक चिज केवल यौनमा जोडिन थालेको छ । विश्वासमा कम, यौन र आकर्षणमा ज्यादा टिकेका वा बनेका सम्बन्धमा कुन बेला कहाँ अविश्वास पैदा भएर टुट्छ थाहा हुँदैन । पुरा पढ्नुहोस्